ဒီဂီယာနဲ့အိုးထရက်ဖို့လမ်းခွဲက လမ်းလွဲသွားနိုင်သလား? – FBV SPORT NEWS
July 10, 2021 By admin Sports News
ဒီနှစ်အပြောင်းအရွေ့ဈေးကွက်မှာ ယူနိက်တက်အတွက် အကြီးအကျယ်ခေါင်းခဲစရာ ပြဿနာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဂိုးသမားပြဿနာနဲ့ပက်သက်ပြီး ဒီကနေ့မနက်မှာတော့ သတင်းထူးလာပါတယ်။
ယူနိက်တက်က တရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်တာမဟုတ်ပေမယ့် အပြောင်းအရွေ့သတင်းတွေမှာ နာမည်ကြီးသတင်းထောက်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့Rudy Galettiကတော့ ယူနိက်တက်ဟာ ဒေးဗစ်ဒီဂီယာကို ရဲ့ကံကြမ္မာကို ဒီနှစ်မှာ အဌားထွက်ကစားစေလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
သို့သော် ဒီဂီယာကတော့ သူ့ရဲ့ မြင့်မားတဲ့လစာကြောင့် အသင်းမှာပဲဆက်ရှိနေချင်ပြီး နံပါတ်တစ်နေရာရောက်အောင်ပြန်ကြိုးစားမယ်လို့တော့ ပြောကြားထားပါတယ်။
ယူနိက်တက်ဘက်က ခိုင်မာတဲ့ သတင်းရင်းမြစ်တစ်ဦးရဲ့ ပြောဆိုချက်အရ ယူနိက်တက်ဟာ အသင်းရဲ့ဈေးအကြီးဆုံးကစားသမားကို အဌားထွက်ကစားစေတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီမှာ မန်ချက်စတာယူနိက်တက်အသင်းဟာ ဒီဂီယာကို နံပါတ်တစ်ဂိုးသမားကနေ ဟန်ဒါဆန်နဲ့ အပြောင်းအလဲ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီဂီယာဟာ အသင်းမှာ လခအများဆုံးရနေတဲ့ကစားသမားဖြစ်ပြီး ယူရိုပါလိဂ်ဖိုင်နယ်မှာ ပယ်နတီတစ်လုံးမှမဝင်တဲ့အပြင် လွဲချော်ခဲ့လို့ ဝေဖန်မှုတော်တော်လေးခံခဲ့ရပါတယ်။
တစ်ဖက်မှာလည်း ယူနိက်တက်အသင်းရဲ့ စိတ်ဓါတ်ပြင်းတဲ့ ဂိုးသမားဟန်ဒါဆန်က ဒီနှစ်မှာ နံပါတ်တစ်နေရာကို မရဘူးဆိုရင် အသင်းကထွက်သွားမယ်လို့ ပြောကြားထားတဲ့အတွက် ဒီဂီယာအတွက် ယူနိုက်တက်တို့ ရွေးချယ်စရာသိပ်မရှိပါဘူး။
Rudy Galettiရေးသားထားကတော့ ယူနိက်တက်အသင်းဟာ ဒီဂီယာရဲ့များပြားတဲ့လစာငွေကြောင့်လည်း ဒီလိုဆုံးဖြတ်မှုဖြစ်လာစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်.
ဒီဂီယာဟာ အိုးထရက်ဖို့ကနေ လာလီဂါအသင်းတွေဖြစ်တဲ့ ဗန်လန်စီယာနဲ့ဗီလာရီးရဲလ်အသင်းတို့ကိုသွားနိုင်ချေများတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒီအသင်းတွေက ဒီဂီယာကို စိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ ဟန်ဒါဆန်ကစားခွင့်ရတဲ့အချိန်နဲ့ ဒီဂီယာနှိုင်းယှဉ်ချက်မှာ ဟန်ဒါဆန်ကပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ၇၆ရာခိုင်နှုန်းအထိ ဂိုးပေါက်ကာကွယ်ထားနိုင်ပြီး ဒီဂီယာက
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ယူနိက်တက်အတွက်က ရွေးချယ်စရာသိပ်မရှိလို့ ၂ယောက်ထဲကတစ်ယောက်သေချာရွေးရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ယူနိက်တက်မှာ ဒီနွေမှာအသစ်ရောက်လာတဲ့တွမ်ဟန်တန်ကလည်းရှိနေသေးပါတယ်။ မန်ဖန်တွေရောဘယ်လိုထင်လဲ ဒီဂီယာကို အဌားချသင့်တယ်ထင်လား?